Igumbi Lokulala Elilodwa Elibukekayo kuPalm Jumeriya - I-Airbnb
Igumbi Lokulala Elilodwa Elibukekayo kuPalm Jumeriya
U-Key View unokuphawula okungu-3077 kwezinye izindawo.
I-Key View iyaziqhenya ukwethula leli gumbi lokulala elinesitayela esisodwa endaweni ekhethekile yePalm Jumeriya. Ikhaya lamahhotela amaningi asezingeni eliphezulu, amabhishi angasese, indawo yokudlela enempilo kanye nezindawo zokuphumula ezigcwele eClub Vista Mare naseWest Palm Beach, kanye neNakheel Mall esanda kuvulwa - ulahlekelwe ukuthi ungakhetha! Gxumela emotweni yakho futhi emizuzwini emi-5 uzobe use-Dubai Marina ephilayo noma uthathe ithuba lesimo sezulu esishisayo sase-Dubai unyaka wonke endaweni eyisakhiwo sodumo i-JBR Beach & JBR Hamba ngaphandle kwesifunda senxanxathela yezitolo.
Ukubuka Okubalulekile kuyakwamukela Ekhaya lakho kude nasekhaya!
Ithoni yombala epholile engathathi hlangothi, enezindonga zezitini ezifakiwe nezitshalo eziluhlaza ezizolile zikubingelela emnyango waleli fulethi elihle lokulala elilodwa e-Palm Jumeriah. Ifaka uhlelo lwesitezi esivulekile kancane, eliqinisekisa ukuthi uhlala uxhumekile kobathandayo ngisho noma wenza ukudla okuphefumulelwe Umpheki oMkhulu ekhishini lakho elihlome ngokuphelele. Indawo yokuhlala enesandla esivulekile inetafula lokudlela elihlalisa abantu abane kanye negumbi lokuphumula elikhulu elimise okuka-L elibekwe phambi kwesikrini sakho esikhulu se-smart TV, indawo ekahle yokuphumula ngemva kosuku olumatasatasa lokubuka indawo. Le ndawo igelezela ku-balcony yakho enobukhulu obumangalisayo enokubukwa komphakathi nomgwaqo. Ekamelweni uzothola umbhede olingana nenkosi ofakwe ilineni lesiginesha ye-Key Views elithokomele futhi elithambile kanye nenye i-TV yesikrini esikhulu. Kukhona indawo ehlukile yokuhamba ekhabetheni lezingubo eduze negumbi lokugezela eliphinde libe namathawula aluhlaza okubuka Ukubuka kanye nezinsiza zebanga lamahhotela ukukushiya unuka kamnandi usuku lonke.
Kukhona neyodwa yangasese endaweni yokupaka izimoto.
Sicela wazi ukuthi leli fulethi alikwazi ukufinyelela indawo yokuzivocavoca noma indawo yokubhukuda.
Ifulethi alizuzi ngokugcinwa kwansuku zonke, nokho ukuhlanza okwengeziwe kungahlelelwa imali enqunyiwe ngesaziso samahora angama-24 uma kuceliwe. Ifulethi elihlala wena uqobo, sikunikeza iqoqo lezinto zangasese, sicela uqaphele izinto ezisetshenziswayo ezifana nezinongo zokupheka, imikhiqizo yokuhlanza, izinto zangasese ezengeziwe azinikezwa. Kukhona i-WiFi yejubane eliphezulu kulo lonke efulethini enesivinini esimaphakathi esingu-250mbps.